IPhone 13 Pro iyo Pro Max waxay ku iftiimayaan soo bandhigidooda rasmiga ah | Wararka IPhone
IPhone 13 Pro iyo Pro Max ayaa ku iftiimaya soo bandhigidooda rasmiga ah
Angel Gonzalez | | iPhone 13, Noticias
Ka dib markaan soo bandhigno iPad -ka cusub iyo iPad -ka cusub iyo Taxanaha Apple Watch 7 waa soo jeedintii iPhone 13. Xanta badan kadib Waxaan horeyba u haysannay iPhone 13 Pro cusub iyo iPhone 13 Pro Max. Qalabkan cusub ayaa ku andacoonaya inuu yahay calankii tusaalaha iPhone -ka Apple. Iyada oo leh astaamo cusub oo ah heerka qalabka iyo imaanshaha A15 iyo chip ProMotion, waxay ka dhigaan taleefanka casriga ah ee ugu awoodda badan suuqa.
IPhone 13 Pro cusub iyo Pro Max, calanka Apple
Kaamirooyinka cusub ee moodooyinkaan Pro waa: telephoto, xagal ballaaran iyo xagal ballaaran. Dareemayaal cusub ayaa lagu daray oo dammaanad qaadaya buuqa yar iyo xawaaraha xiritaanka hoose si loo hagaajiyo sawirrada hab habeennimo. 3x zoom indhaha ah ayaa sidoo kale lagu daray. Kaamirada cusub ee xagal ballaadhan ayaa oggolaanaysa Sawirro Macro diirada saaraya walxaha yaryar ee ugu yar masaafo 2 cm ah. Natiijooyinku waa yaab iyo xusid mudan.
Dhammaan kamaradaha, oo ay ku jiraan telephoto, ku dar hab Habeenkii. HDR 4 caqli badan ayaa sidoo kale lagu daray, taas oo u oggolaanaysa sawirrada in la wanaajiyo iyada oo la falanqeynayo dhammaan kuwa isticmaalay. Hababka Sawirka ayaa sidoo kale lagu daray, sawir qaade muuqaal cusub ayaa jeclaan doona. Waxay kaloo ku daraan nidaamka duubista DolbyVisionHD iyo nidaamka socodka xirfadda ayaa sidoo kale lagu daray ProRes oo leh duubitaan tayo leh ilaa 4K.
Heerka dhammaadka, IPhone 13 Pro iyo Pro Max waxaa lagu heli doonaa afar dhammaad: garaaf, dahab, lacag iyo sierra buluug. Dhab ahaantii, hore ayaa dib loo naqshadeeyay hoos u dhigista 20%, sida walaalaheeda yar iPhone 13 iyo 13 mini. Qaab dhismeedkeeda oo dhan wuxuu ku salaysan yahay bir birta ka samaysan oo dhabar qurxoon oo dhaldhalaal ah oo qurxoon laga sameeyay.
Shaashadda cusub ayaa la wacay Super Retina XDR. Shaashaddaadu waxay u dhigantaa 6,1 inji iyo 6,7 inji ee nooca Pro iyo Pro Max siday u kala horreeyaan. Guddiyada OLED waxay leeyihiin tikniyoolajiyadda IP68 iyo ugu dambayntii waxay haystaan ​​cabbirro cabbirkoodu dhan yahay 120 Hz, Muuqaal ay adeegsadayaashu aad u weydiinayeen tan iyo iPhone 11.
Gudaha, iPhone 13 Pro iyo Pro Max ayaa wata Chip A15 oo leh CPU leh 2 xabbadood oo cusub oo waxqabad sare leh iyo 4 xargo oo tayo sare leh oo cusub. Intaa waxaa sii dheer, waxay ku dartay tikniyoolajiyad ku filan gudaha si loo hagaajiyo Mashiinka Neural, iyadoo hubineysa inay leedahay awood ku filan dhammaan noocyada cayaaraha fiidiyaha iyo codsiyada aadka loo dalbado. Ugu dambeyntiina, GPU -ga dib loo habeeyay wuxuu leeyahay 5 koorso.
Qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $ 999 loogu talagalay iPhone 13 Pro y $ 1099 loogu talagalay iPhone 13 Pro Max. Kaydiyadu waxay ka bilaaban doonaan 128GB waxayna kor u kici doonaan 1TB. Waxay diyaar u ahaan doonaan boos celin laga bilaabo Jimcaha. Oo si rasmi ah dhammaan iPhone -ka waxaa laga iibin doonaa 11 illaa 13 Pro Max, marka laga reebo moodooyinka Pro ee iPhone 12.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » IPhone 13 Pro iyo Pro Max ayaa ku iftiimaya soo bandhigidooda rasmiga ah
Apple waxay soo bandhigaysaa iPhone 13 cusub iyo iPhone 13 mini
Apple waxay ku dhawaaqday imaanshaha Apple Fitness + ee Spain deyrtaan